Xiaomi Mi MIX35G: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်စတင်ခြင်း Androidsis
Xiaomi Mi MIX35G: Xiaomi ၏ပထမဆုံး 5G ဖုန်းသည်တရားဝင်ဖြစ်ပြီးသင့်အတွက်စမ်းသပ်ခဲ့သည်
အက်ဒါဖာရီနို | | မိုဘိုင်း, Xiaomi က
Xiaomi သည် MWC 2019. တွင်ယခုတနင်္ဂနွေနေ့၏အဓိကဇာတ်ကောင်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အမှတ်တံဆိပ်သည် 5G နှင့်အတူပထမဆုံးစမတ်ဖုန်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုစွန့်ခွာသွားသည်။ လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကသင်သိပြီးဖြစ်သကဲ့သို့ ၎င်းသည် Mi MIX3၏အထူးမူကွဲဖြစ်သည်။ ဒီမော်ဒယ်ဟာဘာစီလိုနာမှာဖြစ်မယ့်အဖြစ်အပျက်ကိုရောက်ရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်၊ နောက်ဆုံးတော့ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီးပြီ။ Xiaomi Mi MIX35G သည်တရားဝင်ဖြစ်သည်။
သင်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းကိရိယာသို့အပြောင်းအလဲများစွာပြုလုပ်ထားသည်။ ပထမပြောင်းလဲမှုဖြစ်ကောင်းအရေးအပါဆုံး၊ Xiaomi Mi MIX35G သည် Snapdragon 855 နှင့်အတူရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်သည်, စျေးကွက်တွင်စွမ်းအားအရှိဆုံး processorဒါကြောင့် 5G အတွက်ဒီအထောက်အပံ့ရှိပါတယ်။ အောက်မှာပြောချင်ပါတယ်။
ဒီဇိုင်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌, ကဝိသေသလက္ခဏာများကိုထိန်းသိမ်းထားသည် ကျနော်တို့မူရင်းမော်ဒယ်တွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါပြီ။ ထိုကွောငျ့, ကျနော်တို့ကြွေ finish ကိုရှာပါပြီးခဲ့သည့်ဆောင်း ဦး ရာသီတွင်စတင်မိတ်ဆက်စဉ်ကဆွဲဆောင်မှုရှိသည့် slider ဒီဇိုင်းအပြင်၊ အတွင်းထဲ၌ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤပြောင်းလဲမှုများကိုတွေ့သည်။
ဤရွေ့ကားများအတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှသောပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ကြသည် Xiaomi Mi MIX35G သည်ပထမဆုံးစမတ်ဖုန်းဖြစ်သည် 5G ကိုအထောက်အပံ့ပေးရန်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်သည် တရားဝင်ဖြစ်စျေးကွက်အပေါ်ပထမ ဦး ဆုံးတစ် ဦး အပြင်။
1 အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် Xiaomi Mi MIX35G
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် Xiaomi Mi MIX35G
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏ဤအဆင့်မြင့်အရည်အသွေး၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတွေ့နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းမူရင်းပုံစံနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကပြောင်းလဲမှုအနည်းငယ်သာရှိသည်။ ဤကိစ္စတွင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောပရိုဆက်ဆာနှင့် modem ကိုတွေ့ရသည် Device မှာ 5G နဲ့အဆင်ပြေပါတယ်.
နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ Xiaomi Mi MIX35G
အမှတ် Xiaomi က
ပုံစံ Mi ရောနှော35G
operating system MIUI 8.1 ဖြင့် Android 10 Oreo
ဖန်သားပြင် ၆.၃၉ လက်မအရွယ် AMOLED Resolution 6.39 x 1080 Pixels နှင့်အချိုး ၁၉ ဖြစ်ပါသည် 5: 9
Processor ကို Qualcomm Snapdragon 855 ရှစ် core
GPU ကို Adreno 630
ရမ်6/ 8 / 10 GB အထိ
ပြည်တွင်းသိမ်းဆည်းခြင်း 64 / 128 / 256 GB အထိ
နောက်ကင်မရာ aperturesf/ 12 နှင့်f/ 12 နှင့် LED Flash တို့ဖြင့် 1.8 + 2.4 MP
ရှေ့ကင်မရာ 24faperture နှင့်အတူ2+1.8 အမတ်
ဆက်သွယ်မှု 5G Dual SIM Bluetooth 5.0 WiFi 802.11a /b/ g / n / ac USB-Type C
အခြားအင်္ဂါရပ်များ နောက်ဘက် NFC fingerprint sensor 3n 3D face unlock
ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းခြင်းနှင့်ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်းနှင့်အတူ 3.800 mAh
စြေး 599 ယူရို
မော်ဒယ်တွင်တွေ့ရသောပြောင်းလဲမှုတစ်ခုမှာသိုလှောင်မှုရွေးချယ်စရာများပိုမိုရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ RAM ၏မူကွဲ ၃ မျိုးရှိပြီးသားဖြစ်ပြီး ၁၀ GB GB RAM ဖြင့်ပထမဆုံးရောက်ရှိလာသည့်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ ဒီဗားရှင်းမှာတော့ 10G နဲ့အတူ RAM သုံးမျိုးနဲ့ထပ်မံတွေ့ကြုံရပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သိုလှောင်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌ရွေးချယ်စရာသုံးခု, 64/128 သို့မဟုတ် 256 GB ကိုစွမ်းရည်။ အသုံးပြုသူသည်သူနှင့်အသင့်တော်ဆုံးကိုရွေးချယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် Xiaomi Mi MIX35G ကိုအပြောင်းအလဲမရှိဘူးဆိုတာတွေ့နိုင်တယ်။ အဆိုပါကိရိယာသည်၎င်း၏မူလသတ်မှတ်ချက်များကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ များစွာသောစိတ်ပျက်စရာဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုမှာ operating system ဖြစ်သည်။ ကိရိယာကတည်းက Android 8.1 Oreo ကိုအသုံးပြုထားဆဲဖြစ်သည်။ Android Pie နဲ့အတူရောက်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်အခုတရားဝင် update ကိုလက်ခံရရှိသည်အထိစောင့်ဆိုင်းရပါလိမ့်မယ်။ ဒီနှစ်ဘယ်အချိန်မှာဖြစ်ပျက်မလဲဆိုတာမသိရဘူး၊ ဒီနှစ်ဒုတိယသုံးလပတ်မှာဖြစ်မယ်။
Xiaomi ကဒီပစ္စည်းကိုနိုင်ငံတကာမှာဖြန့်ချိတော့မယ်ဆိုတာအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ သူတို့ကမကြာမီဥရောပကိုရောက်ရှိလိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်ယခုအချိန်တွင်သူတို့ကအတိအကျရက်စွဲမပေးရပေမယ့်။ ဒါကြောင့်ဒီသီတင်းပတ်များအတွင်းသတင်းအချက်အလက်များထပ်မံစောင့်ဆိုင်းရပါလိမ့်မယ် ကျွန်ုပ်တို့လက်ရှိ၌ဤစက်ပစ္စည်း၏စတင်ဈေးနှုန်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြပြီးပြီဖြစ်သောကြောင့် Xiaomi Mi MIX35G ဗားရှင်းများစွာကိုတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ၎င်းတို့ထဲမှအနိမ့်ဆုံးမှာ6GB RAM နှင့် 64 GB Internal Storage ပါရှိသည်။ ဒီကိစ္စမှာ, ဒီဗားရှင်းမှာ ၅၉၉ ယူရိုရှိမည်ကုမ္ပဏီကိုယ်တိုင်ကပြီးသားအတည်ပြုခဲ့သည်အဖြစ်။ ကျန်တဲ့စက်ပစ္စည်းများ၏မူကွဲများမည်သည့်စျေးနှုန်းများကျသင့်မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိပါ။ ဒါပေမယ့်မကြာခင်မှာပဲဒီစျေးနှုန်းတွေကိုရောက်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Xiaomi Mi MIX35G: Xiaomi ၏ပထမဆုံး 5G ဖုန်းသည်တရားဝင်ဖြစ်ပြီးသင့်အတွက်စမ်းသပ်ခဲ့သည်
Huawei P10 Pro ၏ 30X zoom ကိုပြသသောဓာတ်ပုံများပေါ်လာသည်
OUKITEL သည်ဖုန်းအသစ်များကို MWC တွင်တင်ပြသည်